तेस्रो त्रैमासमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा १२.९४%ले बढ्यो, ईपीएस कति ? Bizshala -
तेस्रो त्रैमासमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा १२.९४%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफा झन्डै १३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।
आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १२.९४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो।
समीक्षा अवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा पनि १३.१४ प्रतिशतले बढेर १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा यस्तो मुनाफा १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।
यो अवधिमा संस्थाले १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ३३.८२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको यस्तो आम्दानी १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
संस्थाले समीक्षा अवधिमा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सापटी लिई ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सापटी लिई ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
संस्थाको रिजर्भको आकार पनि २०.५ प्रतिशतले बढेर २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको भएको छ। गत वर्ष रिजर्भमा १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
चुक्तापुँजी ८७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको संस्थाको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १४.८९ रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ५९.३९ गुणा रहेको संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२६.६४ रुपैयाँ रहेको छ।
first microfinance laghubitta bittaya sanstha ltd Q3 2077/78
समाज र स्वस्तिक लघुवित्तले एकैपटक डाके विशेष साधारणसभा, मर्जर
काठमाण्डौ । आपसमा मर्जर हुने अन्तिम सम्झौता पारित गर्न समाज...
स्वावलम्बन लघुवित्तको नाफा ५२.७९%ले घट्यो, ब्याज आम्दानी
काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा स्वावलम...
सबैको लघुवित्तको सीईओमा केशवकुमार पौडेल पुनः दोस्रो
काठमाण्डौ । सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख...
तेस्रो त्रैमासमा ग्रामीण विकास लघुवित्तको लोभलाग्दो प्रगति,
काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु...
किसान लघुवित्तको नाफामा उछाल, रिजर्भमा छलाङ
काठमाण्डौ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक...
निर्धन उत्थान लघुवित्तको नाफा ५१.०५%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु...
नाडेप लघुवित्तद्वारा छैटौँ वार्षिक साधारणसभा रद्द
काठमाण्डौ । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो छैटौँ...